नेकपा कर्णाली विवाद: प्रधानमन्त्री ओलीले भने– दुई अध्यक्ष मिलेर विवाद मिलाउँछौँ ! « MNTVONLINE.COM
नेकपा कर्णाली विवाद: प्रधानमन्त्री ओलीले भने– दुई अध्यक्ष मिलेर विवाद मिलाउँछौँ !
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेशका दुवै पक्षलाई राखेर बालुवाटारमा छलफल गरेका छन् । आज दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन् । छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहीसहितका नेताहरुले आ–आफ्ना कुराहरु राखेका थिए । सबैका कुरा सुनेपछि अन्तिममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कुरा राखेका थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीले हामी सबैका कुरा सुनेपछि आफ्नो धारणा राख्नुभयो,’ प्रदेश सचिव मायाप्रसाद शर्माले भने । छलफलमा आफूले पार्टी र सरकार प्रभावकारी रुपले सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा राखेको उनले बताए । तपाईंहरुको कुरा मैले सुनें । अब म र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बसेर छलफल गर्छौँ,’ ‘हामी दुई अध्यक्ष बसेर विवाद मिलाउँछौं । तपाईहरु काठमाडौं छोडिनहाल्नुस्, ओलीको भनाइ उधृत गर्दै उनले भने, ‘हामी उपयुक्त निर्णय लिन्छौँ । तपाईंहरुले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ ।’
छलफलमा पार्टी महासचिव एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, कर्णाली प्रदेशका सह–इन्चार्ज यामलाल कँडेल, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, प्रदेश अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी, सचिव मायाप्रसाद शर्मा, केन्द्रीय सदस्यद्वय गुलावजङ्ग शाह र चन्द्रबहादुर शाही सहभागी थिए ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवम् संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध १८ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि विवाद देखिएको थियो । दुवै पक्षका नेताहरुलाई काठमाडौं छलफलका लागि बोलाइएको थियो ।